Vaovao - Fanatsarana ny vokatra ny sandry lava
Vokatra iray, amin'ny alàlan'ny fanavaozana tsy tapaka fotsiny ihany, no ahafahan'ny mpanjifa miaina traikefa mpampiasa tsara kokoa.
Araka ny hevitry ny mpampiasa sy ny fampidirana ireo teknolojia vaovao dia nohavaozinay ny sandriny nitarina (sandry mihodina na sandry marindrano) an'ny jiro miasa amin'ny valindrihana.
Misy fiovana roa lehibe.
Voalohany, tamin'ny fisehoana dia nanamboatra chamfer izahay tamin'ny faran'ny sandry nahinjitra.
Ny sandriny nitarina taloha ny jiro miasa tsy sakanana.
Inona no atao hoe chamfer? Izy io dia manondro ny fanodinana ny fanapahana ny zoron'ny sangan'asa ho kofehy iray.
Amin'ny fampidirana ny famolavolana chamfer, tsy afaka misoroka ny burrs vokatry ny milina fotsiny isika, fa mampitombo ihany koa ny fahafaha-mametraka azy. Satria ny sandry lava manitatra dia azo ampifandraisina mivantana amin'ny sandry lohataona, tsy ilaina ny tehina fanitarana.
Faharoa, raha ny fahitana ny firafitry ny vokatra dia novainay ny peratra conductive anatiny.
Taloha, ny tsanganana conductive sy ny peratra conductive dia nisy lohataona tao anatiny, ary ny herin'ny lohataona dia niantoka ny fifandraisana azo antoka ny fifandraisana.
Saingy noho ny maha-manokana ny akora varahina, rehefa mandeha ny fotoana, dia hitrandrahana noho ny fampiasana ankehitriny na tsy mety, ka mahatonga ny lohataona tsy hiasa ary indraindray tsy dia mifandray.
Ankehitriny dia naka teknolojia vaovao sy fitaovana vaovao izahay, izay tsy vitan'ny hoe mampitombo ny sehatry ny fifandraisana, fa manalava ihany koa ny fiainam-panompoany, manatsara ny tahan'ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana ratsy.
Mikasika ny fifandraisana sy ny fitaovan'ny sandry lava, manome safidy malalaka ihany koa izahay
Mifandraika amin'ny sandry lohataona, manana safidy roa isika amin'izao fotoana izao. Ny fanaingoana mahazatra dia tsy manana tsorakazo mampifandray, izay mety kokoa ho an'ny mpanjifa mametraka tsy miankina.
Fa raha avo indrindra ny haavon'ny mpanjifa dia azontsika atao koa ny manisy tsorakazo mampifandray.
Ary ny sandry maivana amin'ny jiro miasa dia misy amin'ny fitaovana roa, sandry aluminium sy sandry vy, hamaly ny filan'ny teti-bolan'ny mpanjifa samy hafa.
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina sy combo fivarotana, traikefa an-taonan'ny famokarana sy ny varotra dia mamela antsika tsy hahafantatra ny tena ilain'ny mpanjifa ihany, fa koa hahafantatra ny fomba hanatsarana ny vokatra sy hanitatra amin'ny fomba mandaitra ny androm-piainana.
Manantena izahay fa afaka manampy anao amin'ny fananganana efitrano fandidiana tonga lafatra kokoa izahay.